Hello Nepal News » मेस्सी भित्र्याउन इन्टर मिलान ‘पैसाको खोलो’ बगाउन तयार : ‘बम्पर अफर’मा के–के छन् ?
मेस्सी भित्र्याउन इन्टर मिलान ‘पैसाको खोलो’ बगाउन तयार : ‘बम्पर अफर’मा के–के छन् ?
इटालियन क्लब इन्टर मिलान स्पेनिस बार्सिलोनाका सुपरस्टार लिओनल मेस्सी भित्र्याउन पैसाको खोलो बगाउन तयार रहेको रिपोर्ट बाहिरिएको छ । इटालियन तथा स्पेनिस मिडियाले यस खबरलाई ‘हट न्युज’ बनाएर प्रकाशित गरिरहेका छन् । हाल ३३ वर्ष पुगेका अर्जेन्टिनी फरवार्डको बार्सिलोनासँग नयाँ सिजन २०२०–२१ को अन्त्यसँगै सम्झौता सकिँदैछ ।
नयाँ सिजनको अन्त्यसँगै मेस्सीले फ्रि ट्रान्सफरमा क्लब छाड्न पाउनेछन् । अर्थात्, उनलाई भित्र्याउन क्लबले पैसा तिर्नुपर्ने छैन । यही मौकाको फाइदा उठाउन मिलान आतुर देखिन्छ । यदि जारी सिजन बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिगमा असफल भए र नयाँ सजन पनि ठूला उपाधि जित्न नसके मेस्सीले क्लबसँग सम्झौता नवीकरण नगर्ने पक्का छ । त्यो बेला मिलानले मेस्सीलाई ‘ड्रिम प्लान’का रूपमा इटाली भित्र्याउन चाहेको छ ।
रिपोर्टअनुसार मिलानले मेस्सीलाई चार वर्षसम्मका लागि प्याकेजमा २६० मिलियन युरो तलब–सुधिवा दिएर अनुबन्ध गर्न प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । ऊ चार सिजनका लागि एकसाथ सुरुमै सम्झौता गर्न तयार छ ।
पछिल्लो समय मिलान आर्थिक रूपमा निकै मजबुत बनेको छ । र, मिलानका अध्यक्ष स्टिवन झाँगा मेस्सीका ठूला फ्यान भएकाले पनि उनले मेस्सीलाई अनुबन्ध गर्न ठूलो रकम खर्च गर्न मार्गप्रशस्त गर्न तयार छन् । यो बताइएको छ कि, मिलान युभेन्टसले क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई दिनेभन्दा मेस्सीलाई निकै आकर्षक तलब–सुविधा दिएर अनुबन्ध गर्न तयार छ ।
रिपोर्टअनुसार यदि मेस्सीले बार्सिलोना छाडे उनलाई प्रतिसिजन ५० मिलियन युरोसम्म सुविधा दिन मिलान तयार छ । र, ऊसँगको त्यो क्षमता पनि छ । युभेन्टसले रोनाल्डोलाई अहिले प्रतिसिजन ३२ मिलियन युरो तलबापत दिँदै आएको छ । रिपोर्टहरूमा मेस्सीका प्रतिनिधि र मिलानका अधिकारीबीच छलफल चलिरहेको दाबी गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति १७ श्रावण २०७७, शनिबार १२:३९
नापोलीलाई हराउँदै बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टरफाइनलमा
बार्यन भर्सेस चेल्सी : पहिलो हाफमा बार्यन २–१ ले अघि
बार्सिलोना भर्सेस नापोली : नाटकीय पहिलो हाफमा बार्सिलोना ३–१ ले अघि !
बार्सिलोना र नापोलीको प्लेइङ–११ घोषणा : को–को परे ?
बार्सिलोनाविरुद्ध खेल्नु सगरमाथा चढ्नुजस्तै : नापोली प्रशिक्षक
बार्सिलोना र नापोलीको म्याच प्रिभ्यु : टोली विश्लेषण र सम्भावित प्लेइङ–११
च्याम्पियन्स लिग भिडन्त : आज बार्यनसँग भिड्दा चेल्सीलाई ‘चमत्कार’को आश !
आज बार्सिलोना र नापोलीको भिडन्त हुँदै : बार्सालाई ‘अर्को चोट’ दिने नापोलीको दाउ !
१ हजारको नयाँ नोटमा नेपाली ‘राम–लक्ष्मण’ जुम्ल्याहा हात्तीको फोटो
नेपालमा सुनको भाउले बनायो नयाँ रेकर्ड
ब्राजिलमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ८० हजार नाघ्यो
कोरोना छिचोल्दै सार्वजनिक यातायात चलाउने व्यवसायीको निर्णय
नेपालमा थप १७३ जनाले कोरोना जितेर घर फर्किए
नेपालमा थप ५८ जना कोरोना जितेर घर फर्किए